ဒေါ့မှနျအသငျးတိုကျစဈမှူး ဟာလနျးဟာ ဘှနျဒကျဈလီဂါမှာ အဖှငျ့ ၂ပှဲကစားပွီးခြိနျ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ၅ဂိုးသှငျးယူကာ စံခြိနျသဈတငျနိုငျခဲ့ကွောငျး သိရပါတယျ။ ဒီထကျပိုခြီးကြူးစရာကောငျးတာက နျောဝလေကျရှေးစငျ ဟာလနျးဟာ အဲဒီစံခြိနျသဈတငျနိုငျဖို့ စုစုပေါငျး ၅၇ မိနဈပဲ အခြိနျယူခဲ့ရတာဖွဈပွီး တဈပှဲပမျြးမြှ ၇.၉ ဂိုးနှုနျးတောငျ ရှိနပေါတယျ။
ဒီအတှကျကွောငျ့လညျး ဘှနျဒကျဈလီဂါသမိုငျးတဈလြှောကျ အသငျးသဈအတှကျ အဖှငျ့ ၂ပှဲမှာ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ဟာလနျး စံခြိနျတငျနိုငျခဲ့တာ သိပျပွီးထူးဆနျးတဲ့ကိစ်စမဟုတျဘဲ အဲဒီ ၂ပှဲစလုံးမှာ သူဟာ အရနျကစားသမားအဖွဈသာ ပါဝငျကစားခှငျ့ရခဲ့တာပါ။
ဆဲလျဘတျတိုကျစဈမှူးဟောငျး ဟာလနျးဟ အော့ဈဘတျနဲ့ပှဲမှာ ပှဲပွီးဖို့ ၃၄မိနဈအလိုမှာ လူစားဝငျကစားသမားအဖွဈ ပထမဆုံးအကွိမျပါဝငျကစားခှငျ့ရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ကှငျးအတှငျး သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးထိမှုကနေ အသငျးသဈအတှကျ သူ့ရဲ့ဗှဆေျောဦးဂိုးပါသှငျးယူနိုငျခဲ့သလို ပှဲအပွီးမှာ ဟကျထရဈရှငျအဖွဈပါ ခံယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီပှဲမှာ ဒေါ့မှနျက ဟာလနျးလူစားဝငျလာခြိနျမှာ ၃-၁ ဂိုးနဲ့အရေးနိမျ့နခေဲ့တာဖွဈပွီး ပှဲအပွီးမှာတော့ ၃-၅ ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တာပါ။ သောကွာညက ကိုလုံးကို ၅-၁ ဂိုးနဲ့အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာလညျး ဟာလနျးဟာ လူစားဝငျလာပွီးနောကျ ၂ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ဂှါရဲရိုး၊ မာကိုရူးဈနဲ့ ဆနျခြိုတို့လညျး ဂိုးတှအေသီးသီးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။
Erling Haaland will start on the bench in tonight's match.
Last time he did this in 20 minutes. ⚽️⚽️⚽️
What could he do in 90 min? 🤯#BVBKOEpic.twitter.com/f3uxkM6Dmv
— DW Sports (@dw_sports) January 24, 2020
Video Credit (အော့ဈဘတျနဲ့ပှဲမှ ဟိုကျလိုကျဗီဒီယိုဖွဈပါသညျ။)
အသကျ ၁၉နှဈအရှယျရှိ ဟာလနျးဟာ ပထမရာသီဝကျမှာကတညျးက ဆဲလျဘတျနဲ့အတူ ဂိုးသှငျးစှမျးရညျပွသနိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး ပွညျတှငျးလိဂျ ၁၄ပှဲမှာ ၁၆ဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့သလို ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုအဆငျ့ ၆ပှဲမှာလညျး ၈ဂိုးအထိသှငျးယူနိုငျခဲ့ကာ လီဗာပူးကို အရေးနိမျ့ခဲ့တဲ့ အုပျစုနောကျဆုံးပှဲမှာပဲ ဂိုးပေါကျပြောကျခဲ့ရတာပါ။
Video Credit (ကိုလုံးနဲ့ပှဲမှ နောကျဆုံးဂိုးဖွဈပါသညျ။)
နောက်ထပ်လူစားဝင်ပြီး ဘွန်ဒက်စ်လီဂါသမိုင်းမှတ်တမ်းထဲ နေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့ ဟာလန်း
ဒေါ့မွန်အသင်းတိုက်စစ်မှူး ဟာလန်းဟာ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာ အဖွင့် ၂ပွဲကစားပြီးချိန် ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ၅ဂိုးသွင်းယူကာ စံချိန်သစ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုချီးကျူးစရာကောင်းတာက နော်ဝေလက်ရွေးစင် ဟာလန်းဟာ အဲဒီစံချိန်သစ်တင်နိုင်ဖို့ စုစုပေါင်း ၅၇ မိနစ်ပဲ အချိန်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး တစ်ပွဲပျမ်းမျှ ၇.၉ ဂိုးနှုန်းတောင် ရှိနေပါတယ်။
ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း ဘွန်ဒက်စ်လီဂါသမိုင်းတစ်လျှောက် အသင်းသစ်အတွက် အဖွင့် ၂ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ဟာလန်း စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တာ သိပ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ အဲဒီ ၂ပွဲစလုံးမှာ သူဟာ အရန်ကစားသမားအဖြစ်သာ ပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တာပါ။
ဆဲလ်ဘတ်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဟာလန်းဟ အော့စ်ဘတ်နဲ့ပွဲမှာ ပွဲပြီးဖို့ ၃၄မိနစ်အလိုမှာ လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ် ပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွင်းအတွင်း သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဘောလုံးထိမှုကနေ အသင်းသစ်အတွက် သူ့ရဲ့ဗွေဆော်ဦးဂိုးပါသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ပွဲအပြီးမှာ ဟက်ထရစ်ရှင်အဖြစ်ပါ ခံယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီပွဲမှာ ဒေါ့မွန်က ဟာလန်းလူစားဝင်လာချိန်မှာ ၃-၁ ဂိုးနဲ့အရေးနိမ့်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပွဲအပြီးမှာတော့ ၃-၅ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ သောကြာညက ကိုလုံးကို ၅-၁ ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်း ဟာလန်းဟာ လူစားဝင်လာပြီးနောက် ၂ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဂွါရဲရိုး၊ မာကိုရူးစ်နဲ့ ဆန်ချိုတို့လည်း ဂိုးတွေအသီးသီးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်ရှိ ဟာလန်းဟာ ပထမရာသီဝက်မှာကတည်းက ဆဲလ်ဘတ်နဲ့အတူ ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းလိဂ် ၁၄ပွဲမှာ ၁၆ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့သလို ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့် ၆ပွဲမှာလည်း ၈ဂိုးအထိသွင်းယူနိုင်ခဲ့ကာ လီဗာပူးကို အရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာပဲ ဂိုးပေါက်ပျောက်ခဲ့ရတာပါ။